Morocco: qiimeynta iyo rajooyinka dhaqaale ee lagu dhiirri-galinayo sida uu qabo howlgalka IMF - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Morocco: Dib u eegis iyo dhiirigelinta rajada dhaqaale sida uu qabo howlgalka IMF - JeuneAfrique.com
Hagaajinta maareynta dhaqaalaha dadweynaha, dhaqaalaha oo aad u liita, jawi ganacsi oo kobciya: dib uga soo laabashada Morocco, IMF waxay soo bandhigaysaa indho-indheyn iyo dhiirigelin ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha Boqortooyada.
Iyadoo qayb ka ah ilaalinteeda nidaamka lacagta adduunka, IMF waxay mabda 'ahaan u direysaa kooxo dhaqaaleyahanno ah 189 wadamada xubnaha ka ah XNUMX si ay u qiimeeyaan xaaladda dalka waxayna kugula talinayaan in wax laga beddelo siyaasadaha dhaqaale ama dhaqaale. Nidaamkan, loo yaqaan sida Talada Qaybta IV", Ayaa waxay kordhineysaa warbixinta u oggolaanaysa IMF inay muujiso ra'yi ku saabsan dhaqaalaha dawlad kasta.
Morocco, howlgalka la-talinta ee IMF ayaa socday laba toddobaad, laga bilaabo 19 Maarso ilaa 3 Abriil. Nicolas Blancher, waxay soo bandhigtay kormeerkeeda koowaad, taas oo tilmaamaysa maaraynta dhaqaalaha dadweynaha, dhaqaale badan oo xoog leh iyo jawi ganacsi oo kordhay.
Laba dagaalo si loola dagaallamo: musuqmaasuq iyo shaqo la'aan
Dhaqaalahaan IMF-ka kadib markii ay heleen natiijooyin hordhac ah, IMF dhaqaaleyahanku waxay dhiirri-galinayaan Morocco si ay u sii wataan kala-jajabinta dhaqaalaha iyo dib-u-habaynta waaxda dawladeed si ay ula dagaallamaan musuqmaasuqa, laakiin sidoo kale la dagaalanka shaqo la'aanta ayaa weli sareysa, "Gaar ahaan dhallinyarada".
Waa kuwan qiimeyn, oo tilmaamaya qodobbada ay ka soo baxeen Nicolas Blancher:
"Dhaqaalaha Moroccan ayaa sii wadi doona inuu ka faa'iidaysto raadinta siyaasadaha dhaqaalaha ee miyir-qabka ah iyo dib-u-habeyn qaab-dhismeed," ayuu yiri dhaqaaleyahan. Sida laga soo xigtay isaga, "horumarinta maareynta maaliyadeed iyo kala duwanaanta dhaqaalaha laakiin wuxuu ku tilmaamayaa joogitaanka heerka shaqo la'aanta (9,8% ee 2018, oo ka dhan ah 10% 2017 sida uu qabo Guddiga Sare ee Qorshaynta), gaar ahaan dadka dhalinyarada ah. Marka laga soo tago dibuhabaynta, wuxuu ku adkaysanayaa baahida "si loo hagaajiyo tayada waxbarashada, shaqada suuqa shaqada iyo heerka ka qaybgalka haweenka, iyo sidoo kale jawiga ganacsiga".
Fursadaha koritaanka iyo waxqabadka ganacsiga
« Kobaca dhaqaalaha ayaa gaaray 3% 2018, sicir bararkuna wuu kacay ilaa 1,9% iyo kobaca deynta ayaa sii waday 3,3%, "ayuu yidhi Nicolas Blancher. 2019, koboca dhaqaalahaani waa in uu xasiliyaa iyada oo loo mahadcelinayo dib u soo kabashada hawlaha aan beeraha ahayn, "kadibna wuxuu gaari doonaa 4,5 boqolkiiba muddada dhexe" ayaa yidhi dhaqaaleyahan, iyada oo loo mahadcelinayo sii socodsiinta qaabdhismeedka
Inkasta oo uu kor u kacay kororka dhoofinta, Nicolas Blancher waxay qortay in kororka macaamilka ganacsiga ee hadda jira (5,4% of GDP) ay si gaar ah u sharxi karto "saameynta kororka sicirka saliidda iyo dayrta deeqda".
Si wax looga qabto xaaladaha dhibaatooyinka ee suuragalka ah, dhaqaaleyahani waxa uu tilmaamayaa in "kaydka sarrifka ajnabiga ah uu ku sugnaa heer raaxo leh, oo u dhigma ilaa shan bilood oo soo dejin ah."
"Horumarka dhammaadka bisha Diseembar wuxuu la jaan qaadi doonaa hay'adaha dawladda ee bartilmaameedka miisaaniyadda 3,7% boqolkiiba ee GDP-ka 2018". 2019, hawlgalku wuxuu qeexayaa in maamulku ujeedkiisu yahay in uu hoos u dhigo heerka miisaaniyadda, risiidhada gaarka ah.
Nicolas Blancheri ayaa rajaynaysa in dib-u-habaynta canshuuraha laga wada hadli doono National Assizes May "wuxuu canshuur ka dhigi doonaa mid hufan, caddaalad ah oo ka tarjumaya kobcinta, iyada oo gacan ka siineysa himilada mas'uuliyiinta si loo yareeyo heerka deynta at 60% of GDP ". Dib-u-habaynta canshuurtan waxaa loo isticmaali karaa horumarinta kaabayaasha iyo ilaalinta bulshada, dhaqaalaha ayaa soo jeedinaya.
Ugu dambeyntiina, hadafku wuxuu taageerayaa qorshaha gaarka ah iyo dadaalka Dawladda in ay dib u soo celiso hawlaha shirkadaha dadweynaha ee ganacsiyada muhiimka ah.
"Qeybta maaliyadeed ayaa si weyn u ballanqaaday, khatarta ku aadan xasiloonida dhaqaale ayaa weli xaddidan," ayuu yiri dhaqaaleyahan. Deyn-bixiyeyaasha caadiga ah ayaa weli sarreeya, "Laakiin waxay hoos u dhigeen oo si fiican u bixiyaan".
Ugu dambeyntii, hawshu waxay dhiirrigelisay maamulka Moroco in ay sii wataan hoos u dhigista diirada, iyo in la yareeyo khatarta la xiriirta ballaarinta bangiyada Morocco ee Afrika iyada oo loo marayo wada shaqeyn lala yeesho mas'uuliyiinta kormeerka ee wadamada martida loo yahay.
Ugu danbeyntii, dhaqaaleyahanka IMF wuxuu ku nuuxnuuxsaday in jawiga ganacsiga Morocco uu sii wanaajin doono, gaar ahaanna mahadnaqa dhaqdhaqaaqa Guddiga tartanka iyo fulinta a istaraatiijiyada cusub ee maaliyadda, kaas oo gacan ka geysan doona horumarinta tartanka iyo taageeridda horumarinta SMEs
Farxad Faransiis ah, haween firfircoon: halyeeyga ganacsiga dumarka ee Cameroon